ဆန္ဒတစ်ခုနှင့် ရပ်တည်ခဲ့သော နေ့စွဲများ
"နင်တကယ်ပဲ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလား မေဇော်"
"ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ ဇွန်... ငါ့ရဲ့ ကံကိုက ဒီလိုပဲ ဖြစ်ဖို့ရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်ရတော့မှာပေါ့ "
မလှုပ်မယှက် ငြိမ်သက်စွာ ကြမ်းပြင်ကို စိုက်ကြည့်နေရင်း လေသံလေးထွက်ရုံ ပြောလိုက်တဲ့ စကားမှာစွန့်စားခြင်းတစ်ဝက်၊ နာကျင်ခြင်းတစ်ဝက် ရောယှက်ရှုပ်ထွေးနေ၏။
"မေဇော် နင်ကမိန်းကလေးနော်။ တစ်ခုခုဆိုရင် နင်ပဲနစ်နာမှာ... နာမည်ပျက်မှာ"
အနှစ်နှစ်ဆယ်လောက် သွားအတူ၊ စားအတူ သူငယ်ချင်းထက်ပိုလို့ ညီအစ်မအရင်းတမျှ ချစ်ခဲ့ရသည့် သူငယ်ချင်းကို နှမြောတဲ့စိတ်၊ ပူပင်သည့်စိတ်တို့ဖြင့် ဇွန် တားနေမိသေးသည်။
"ငါလည်း ဒီလိုတော့ ဘယ်ဖြစ်ချင်ပါ့မလဲ သူငယ်ချင်းရယ်။ ဒါပေမယ့် တို့ နှစ်ယောက်လည်း ဒီထက်ပိုပြီးခွဲမနေချင်တော့ဘူး။ ဒီအတိုင်းပဲ သွားနေရင်လည်း သေတဲ့အထိ ပေါင်းရမှာ မဟုတ်တော့ဘူး"
မျက်ဝန်းမှ လျှံတက်လာသော မျက်ရည်၊ တဆတ်ဆတ်တုန်နေသည့် ဖြူဖျော့ဖျော့နှုတ်ခမ်းပါးတို့က ထိန်းချုပ်ခံနာကျင်မှု အတိုင်းအဆကို လှစ်ပြလို့နေသည်။
"နင်လည်း ငယ်တော့တဲ့ အရွယ်မှ မဟုတ်တာ။ နင့်အိမ်က နားလည်လောက်မှာပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကြိုးစားကြည့်ပါလား မေဇော်ရယ်... "
အချစ်ရဆုံး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒါဟာနောက်ဆုံးအကြိမ် နားချခြင်းပဲ ဖြစ်မှာပါ။
"ငါ့ အသက်က ၃၅နှစ်ပဲ ရှိပါသေးတယ် သူငယ်ချင်းရယ်။ ငါ့မိဘက အသက် ၇၀နား ကပ်နေကြပြီ။ဒီအကြောင်း တစ်ခါထပ်ပြောတိုင်း သူတို့ပဲတစ်ခါထပ်ပြီး စိတ်ဆင်းရဲရတယ်။ ငါကအဆူခံ အပင်ပန်းခံနိုင်ပေမယ့် စိတ်ဆင်းရဲတဲ့ဒါဏ်ကို သူတို့မခံနိုင်မှာစိုးတယ်။ ငါလည်း သာမာန် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ ဇွန်ရယ်... သိပ်ပြီးပျော်စရာကောင်းတဲ့၊ မိဘအသိုင်းတွေနဲ့ မင်္ဂလာရှိရှိကျင်းပတဲ့ မင်္ဂလာပွဲတစ်ခုကိုတော့ မလိုချင်ပဲ နေပါ့မလား၊ သိပ်လှတဲ့ သတို့သမီးတစ်ယောက် မဖြစ်ချင်ပဲ နေပါ့မလား။ ဒါပေမယ့် ငါ့မိဘ စိတ်ဆင်းရဲရမှာနဲ့စာရင် အဲ့ဒီပကာသနတွေကို ငါစွန့်လွှတ်လိုက်မယ် ဇွန်... ငါ စွန့်လွှတ်လိုက်မယ်... "
ရှိုက်သံတွေ၊ ငိုသံတွေနဲ့ ရောထွေးနေတဲ့ မေဇော်ရဲ့ ရင်တွင်းပေါက်ကွဲသံဟာ အခန်းအပြင်ဘက်က မိုးခြမ်းသံအောက်မှာ တိမ်ဝင်ပျောက်ကွယ်လို့ သွားပါတော့သည်။
"ဘယ်သူကိုမှ တရားခံ မဖြစ်စေချင်တော့လည်း ကံကိုသာ ရိုးမယ်ဖွဲ့ရတော့မယ်။ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကိုမှ စေစားရက်တဲ့ ကံတရားကိုက ရက်စက်လွန်းပါတယ် မေဇော်ရယ်... "
ပထမနှစ်ကျောင်းသူဘ၀ကတည်းက စားအတူ သွားအတူ၊ စာကျက်တော့လည်း အတူတူ တတွဲတွဲမခွဲတမ်း နေလာကြတဲ့ သူငယ်ချင်း၊ ကျောင်းတွေပြီးလို့ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ကြတော့လည်း အတူတူ၊ တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်း မျှော်တွေးလို့ ရေခြားမြေခြားမှာ ပညာလာရှာကြပြန်တော့လည်း မခွဲမခွာ၊ တစ်ဆင့်မြင် ဘွဲ့တွေရလို့ စီးပွားရှာကြပြန်တော့လည်း စိတ်တူကိုယ်တူမို့ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့နီးရာနီးရာမှာ မနေဘဲ နှစ်ယောက်တတွဲတွဲ မခွဲဘဲနေခဲ့သူ၊ အခန်းဖော်လည်းဖြစ်ပြန်၊ သူငယ်ချင်းလည်းဖြစ်ပြန်သည့် မေဇော်...
အလုပ်ကပြန်လာလို့ ပစ္စည်းတွေ တအိအိ သိမ်းဆည်းနေတာကို မြင်ရတိုင်း ဇွန့် ရင်ထဲမှာ တနင့်နင့်။ပညာလည်းတော်၊ ရုပ်ရည်လည်းရှိ၊ လိမ္မာရေးခြားလည်းရှိ၊ သမီးအကြီးဆုံး ပီပီသသ မိဘမောင်နှမ အပေါ်လည်း သိတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို နှမြောမိသည်ကလွဲလို့ ဇွန်တစ်ယောက် ဘာများတတ်နိုင်ပါမည်နည်း။ ချစ်သောသူငယ်ချင်းတစ်ယောက် သူရွေးချယ်သည့် ခရီးလမ်း ဘေးကင်းပါစေရယ်လို့သာ...။
" နင်ပြောင်းတဲ့နေ့ကျရင် ငါလိုက်ကူမယ်လေ။ ဘယ်နေ့ ပြောင်းမှာလဲ "
ကွန်ပျူတာ စားပွဲပေါ်ရှိ လောလောဆယ် မလိုသေးသည့် စာအုပ်များကို အိတ်ကြီးကြီးတစ်လုံးထဲ စီစီရီရီထည့်နေသည့် မေဇော့်အနားမှာ ရပ်ရင်း မေးလိုက်မိသည်။
" လကုန်ရက် စနေညနေဖြစ်ဖြစ်၊ တနင်္ဂနွေနေ့ မနက်ပိုင်း ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ဇွန်ရယ်။ ရပါတယ်ဟာ နင်ပင်ပန်းနေပါ့မယ်။ ငါ ကိုမြတ် ကိုပဲလာခေါ်ခိုင်းလိုက်မယ်။ "
ပြန်ဖြေနေပေမယ့် စာအုပ်တွေကတော့ အထည့်မပျက်။ နောက်ဆိုရင် တစ်ယောက်အိပ်ခုတင် နှစ်ခုကြားက စားပွဲလေးမှာ ရုံးကပြန်လာတိုင်း မြင်နေရတတ်တဲ့ HP လက်ပ်တော့ပ် အဖြူရောင်လေးနဲ့ ကီးဘုတ်ပေါ်က လက်ချောင်းဖြူဖြူသွယ်သွယ်လေးတွေကို မြင်တွေ့ခွင့်ရတော့မည်မဟုတ်။ တစ်နေ့တာ ဖြစ်ပျက်သမျှအကြောင်း၊ အလုပ်ထဲကအကြောင်း၊ ချစ်သူနှင့်စိတ်ကောက်သည့်အကြောင်းမှအစ ၀မ်းနည်စရာ၊ ၀မ်းသာစရာ၊ ကြည်နူးစရာ အစစအရာရာ တွတ်တီတွတ်တာ ပြောနေတတ်သည့် မေဇော်စကားသံလေးတွေကို နောက်ဆို အမြဲကြားဖို့ အခွင့်သာတော့မည်မဟုတ်ဟု တွေးမိပြန်တော့ ဇွန့် မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်စတို့ခိုတွဲလာကြပြန်သည်။ သဘာဝဆိုတာ လွန်ဆန်လို့ ရရိုးလား သူငယ်ချင်းရယ်။
မိန်းမရွယ်နှစ်ယောက် နှစ်ကာလကြာရှည်စွာ အတူတကွနေလာခဲ့သည့် အခန်းငယ်လေးက အခုတော့ တစ်ယောက်တည်းနဲ့ တိတ်ဆိတ်လို့ ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီ။
ထိုနေ့က မေဇော့်မျက်နှာလေး ညှိုးနေသလိုထင်ရသည်။ ချစ်သူနှင့် အတူနေရတော့မှာမို့ "ပျော်နေတယ် မဟုတ်လား" လို့ တခြားသတို့သမီးတွေကို မေးသလို မေဇော့်ကို ဇွန်မမေးရက်ခဲ့ပါ။ မိဘချင်း ရင်းနှီးနေကြတာမို့ ဇွန့်ဖေဖေနှင့် မေမေကိုပါ မသိစေလိုကြောင်းသာ မေဇော့်နှုတ်ဖျားမှ တဖွဖွ မှာနေသည်။
"ကိုမြတ်ရေ ဇွန့်သူငယ်ချင်းကို စောင့်ရှောက်ပါနော်။ ဆယ့်ငါးနှစ်လောက် ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ သစ္စာရှိလာတဲ့ သူမိုလို့သာ ဇွန်စိတ်ချလက်ချ ထည့်လိုက်တာပါ။ တခြားလူသာဆိုရင် ဒီလိုစိတ်ချမယ် မထင်ဘူး။ "
သူငယ်ချင်းကို စိုးရမ်သည့်စိတ်နှင့် မှာနေမိပြန်သည်။
" စိတ်ချပါ မဇွန်။ ကျွန်တော် မေဇော့်ကို ဘယ်လောက်မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ ချစ်တယ်ဆိုတာကို မဇွန်အသိဆုံးပါ။ သူမပြောနိုင်ရင် ကျွန်တော် သွားတောင်းပါ့မယ်၊ ဆူဆူရိုက်ရိုက်ဗျာ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ ပေါင်းရဖို့ပဲ။ ကျွန်တော် ယောက်ျားတစ်ယောက်အနေနဲ့ သူ့မိဘကို လိုက်ပြောမယ်လို့ ပြောပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သူက သူ့မိဘအကြောင်းကို သူအသိဆုံးဆိုတော့ ကျွန်တော် ဘာများတတ်နိုင်တော့မှာလဲ "
ဇွန် တစ်ယောက် သက်ပြင်းမောကြီးကိုသာ အကြိမ်ကြိမ်ချနေမိတော့သည်။
" ကျွန်တော်က မတရားပြောတာ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း ဒီမှာအခြေအနေတစ်ခုနဲ့ တင့်တင့်တယ်တယ် ရပ်တည်နေတဲ့သူပါ။ ကျွန်တော့်မိဘမျိုးရိုး စာရိတ္တ ဘာတစ်ခုခုကြောင့် သဘောမတူသလဲ ဆိုတော့လည်း ဘာကြောင့်မှ မဟုတ်ဖူး။ သမီးကိုနှမြောနေတာ ဆိုရင်လည်း လွန်လွန်းးပါတယ်လို့ပဲ ပြောရတော့မှာပဲ။ အခု မေဇော်က တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် ဖြေရှင်းတော့ရော သူ့အတွက် ကောင်းပါ့မလားဗျာ... "
ကိုမြတ်ဘက်ကကျတော့လည်း ဇွန်နားလည်ပေးလို့ရသည်။ တစ်နေ့တော့ ကြည်ဖြူလိမ့်နိုးဆိုသည့် မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို သစ္စာရှိရှိစောင့်ခဲ့သည်မှာ သုံးနှစ်သုံးမိုးမက ဆယ့်ငါးနှစ်တိုင်တိုင်ရှိခဲ့ပြီလေ။ မိဘတွေကို အသိပေးနားဖောက်လို့ တစ်ဖက်မိဘက သဘောတူကြည်ဖြူပြီးကာမှ၊ အတိအလင်း တောင်းရမ်းဖို့ စီစဉ်ကာမှအိမ်စီးပွားရေး အဆင်မပြေသေးလို့ ဆိုသည့် အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ယောက္ခမလောင်း၏ ချိုချိုသာသာ အချိန်ဆွဲခြင်းကို ခံရသည်။ ဒုတိယတစ်ခါ စီစဉ်ပြန်တော့ သတို့သမီးဖခင် ကျန်းမာရေးမကောင်းသေးဟုဆိုကာ ငြင်းခဲ့ပြန်သည်။
ဒီလိုနှင့်ပင် တဖြည်းဖြည်း အချိန်တွေလည်း ကြာလာ၊ အသက်တွေလည်း တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကြီးလို့ နှစ်ဆယ်ကျော် အစိတ်ပိုင်းကနေ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခု စွန်းလို့လာခဲ့တော့လည်း "ဒီအရွယ်ကျမှ အိမ်ထောင်ပြုချင်သေးလို့လား" ဆိုသည့် မသိကျိုးကျွံမေးခွန်းနှင့်အတူ "အသက်တွေလည်း ကြီးလာကြပြီဆိုတော့ ကိုယ့်မိသားစုလေးနဲ့ ကျစ်ကျစ်လေးပဲ နေချင်တော့တယ်။ တစိမ်းတရံဆံ ၀င်လာရင်လည်း ကိုယ့်အရင်းအချာလောက် ကောင်းမှာမဟုတ်ဖူး" ဆိုသည့် ရေလာမြောင်းပေး စကားတွေနှင့်ချည်နှောင်စ ပြုလာပြန်သည်။ နောင်များတော့ အသိမိတ်ဆွေတွေ ဆုံကြရင်တောင် " ကလေးတွေက အကုန်အရွယ်ရောက်ကုန်ပြီ။ ဘွဲ့တွေလည်းရကြ၊ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ့်အကိုင်တွေနဲ့။ အိမ်ထောင်ပြုဖို့များ စိတ်တောင်မ၀င်စားကြဘူး" ရယ်လို့ သိသိသာသာမောင်းခတ်လိုက်တဲ့အခါ ရှေ့ရေးကို ဘယ်လိုမှ မျှော်လင့်လို့ မဖြစ်နိုင်တော့မှန်း မေဇော်ရော ကိုမြတ်ပါ နားလည်လာရသည်။
ချစ်သူနှင့် မိဘအကြား ဗျာများရသူကတော့ မေဇော်ရယ်ပေါ့။ ငါးရာနှစ်ဆယ့်ရှစ်နဲ့ တစ်ထောင့်ငါးရာရဲ့ လွန်ဆွဲပွဲမှာ မေဇော်တစ်ယောက် ဓါးစာခံဖြစ်ရရှာသည်။ လမ်းခွဲဖို့ကြိုးစားကာမှ တစ်စတစ်စပို ရစ်ပတ်လာတဲ့ ဆယ့်ငါးနှစ်တိုင်တဲ့ သံယောဇဉ်မေတ္တာ၊ "ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် လက်ထပ်ခဲ့ရင်တော့ မိဘအိမ်ရိပ်တောင် မနင်းလေနဲ့" ဆိုတဲ့ တစ်သက်လုံး တစ်ခွန်းမကျန် နာခံခဲ့သည့် မိဘနှစ်ပါးရဲ့သြဇာ၊ ပြင်းထန်တဲ့ တွန်းကန်မှုကြားမှာ မေဇော်ဘယ်လောက် အလူးအလဲ ခံခဲ့ရသလဲဆိုတာ ကိုမြတ်ကလွဲလို့ ဇွန်တစ်ယောက်သာ နားလည်တော့မှာပေါ့လေ...။
တွန်းအားတွေရဲ့ကြားမှာ နောက်ဆုံးတော့ တစ်စုံတစ်ခုကို မေဇော်ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သိပ်ပြီး နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်၏ နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုသည် ကြမ်းတမ်းခြင်း၊ စွန့်စားခြင်းတွေနှင့် ပြည့်နှက်နေလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဇွန်တစ်ခါမှ မမျှော်လင့်ခဲ့ဖူးပါ။
"နင်လက်မှတ်ထိုးတဲ့အခါ ငါ သက်သေလုပ်ပေးမယ်လေ "
အမှတ်မထင် ပြောထွက်သွားတဲ့ စကားအတွက် ပြန်ကြားရသည့် အဖြေက မိန်းကလေးတစ်ယောက် အတွက် ရင်တုန်စရာကောင်းလွန်းလှသည်ဟုပဲ ဆိုရမလား။
" ဒါဆိုရင်တော့ နောင်ဘ၀မှပဲ လိုက်လုပ်ပေါ့ ဇွန်။ မိဘမျက်စိမပိတ်ခင်အထိတော့ ငါသူတို့ကို ပြုစုခွင့် ရနေချင်သေးတယ်။ "
" ဟင် ဒါဆို... "
" ဟုတ်တယ်လေ... လက်ထပ်သွားရင်တော့ အိမ်ရိပ်တောင် မနင်းနဲ့လို့ပဲ ငါ့ကိုပြောလိုက်တာ။ "
" အို... "
နားတစ်စုံကို လက်ဖ၀ါးနှစ်ဖက်ဖြင့် ယောင်ရမ်းပိတ်ထားလိုက်မိသည်။
ကိုမြတ်လက်ကိုတွဲရင်း နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားသည့် မေဇော့်ကို မျက်စိတစ်ဆုံးငေးရင်း... သက်ပြင်းရှည်ကြီးတစ်ခုကို ယူကြုံးမရခြင်း၊ ၀မ်းနည်းခြင်း၊ မောပန်းခြင်းများစွာဖြင့် ချလိုက်မိတော့သည်။
" ပန်းတစ်ပွင့်ရဲ့ အရည်အချင်း အင်္ဂါရပ်တွေ ပြည့်စုံပါလျက်၊ ပွင့်ချိန်တန်ပါလျက်၊ အတ္တဆိုတဲ့အဆိပ်တွေကြောင့် ကြွားဝင့်တင့်တယ်ခြင်း ကင်းစွာ၊ လျှို့ဝှက်တိတ်ဆိတ်စွာ ပွင့်ကြရရှာတဲ့ ပန်းကလေးတွေ ဟောဒီ လောကကြီးထဲမှာ ဘယ်လောက်များ ရှိနေလိမ့်မလဲနော်... "
၁၉ ဧပြီ ၂၀၁၂
စာရေးသူ - လွမ်းသုရင် at 10:48 PM3ဖတ်သူ့အမြင်
~~~ ခါနွေသင်္ကြန်မီ မှာသလိုလာပြီ ခွန်းချိုနွဲ့နွဲ့ ပေါင်းဖော်စုံညီ တေးသံကျူးရင့်သီ
ဘယ်ညာညီညီမြန်မာဆန်သည် လှယဉ်ဝင်းတဲ့ နွဲ့ကိုယ်ဟန်ညီ လှုပ်လီလှုပ်လဲ့တလီ
ဖူးစဆံချီနုကလေး စီရီတွဲလို့သီ ရွှဲရွှဲစိုရင် ပိုမိုလှသည် နံသာရေသင်းပျံ့ကြည် ~~~
တေးသံရှင် ဟောမာနေဝင်းရဲ့ "ကောင်းသောနှစ်" ဆိုတဲ့ သီချင်းသံက မဏ္ဍပ်ရှေ့မှာ တန်းစီနေကြတဲ့ ရေပက်ခံကားတွေပေါ်က ပရိသတ်တွေကိုရော၊ ပွဲကြည့်စင်ပေါ်က ပရိသတ်တွေကိုပါ အေးအေးငြိမ့်ငြိမ့်လေး လွှမ်းခြုံလို့နေပါသည်။ သီချင်းရဲ့ စည်းဝါးသံနဲ့အညီ ဘယ်ညာယိမ်းနွဲ့လို့၊ ခြေချ လက်ချ ညီညာလှပစွာ ကပြဖျော်ဖြေနေကြတဲ့ ပိတောက်ရောင်ဝမ်းဆက်နဲ့ ဖြူဖြူညိုညို သင်္ကြန်ပျိုမယ်ကလေးတွေရဲ့ အလှကလည်း ရေမှုံရေစက်လေးတွေကြားမှာ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ရှုမြင်သူငေးရတဲ့ ပသာဒတစ်မျိုးဆိုလျှင် မှားလိမ့်မည်မထင်။
တစ်နှစ်မှာတစ်လ တစ်လမှာမှ ငါးရက်လောက်ပဲ ကျင်းပကြရ၊ ပျော်ရွှင်ကြရတဲ့ မြန်မာ့နှစ်သစ်ကို ကူးပြောင်းတဲ့ အတာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ကျင်းပနေတာ ဒီနေ့ဆိုရင် အတက်နေ့ကိုတောင် ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ သင်္ကြန်နောက်ဆုံးနေ့ ဖြစ်တာနဲ့အညီ ပျော်တဲ့သူတွေကလည်း အစွမ်းကုန် ပျော်ကြ၊ ဖျော်ဖြေရေးအဖွဲ့တွေကလည်း မမောနိုင်မပန်းနိုင် ဖျော်ဖြေကြလို့ အရင်နေ့တွေကထက် ပိုပြီး စည်ကားသိုက်မြိုက်နေတယ်လို့ မြင်နေမိပါသည်။ မဏ္ဍပ်ဘေးက ပိတောက်ပင်အိုကြီးကလည်း တစ်နှစ်တာလုံး ပြန်ပြီး အားယူရဦးမှာမို့ ဒီနေ့ မဟာသင်္ကြန်နောက်ဆုံးနေ့မှာ ကျန်သမျှအားကုန်နဲ့ ရွှေရောင်အတောက်ဆုံး ပွင့်အာလို့ နေ၏။
ရေပက်ခံကားတွေပေါ်မှာ၊ ရေပက်မဏ္ဍပ်ပေါ်မှာ လုံလုံခြုံခြုံလေး ခေတ်နဲ့လျော်ညီစွာ ဆင်ယဉ်ပျော်ရွှင်ကြသူတွေ ရှိသလို မောင်နဲ့နှမ၊ သားနဲ့အမိ ကြည့်လို့မှ မတင့်တယ်တဲ့ အပျော်ကိုလွန်ပြီး အပျက်ဘက်ရောက်သွားတဲ့ သူတွေလည်း လူနည်းစုအနေနဲ့ ပါဝင်နေကြဟာ ခေတ်ရဲ့ အခြေအနေပြဂရပ်တစ်ခုပဲလား...။
ဟိုးငယ်ငယ်ကတည်းက သင်္ကြန်ရောက်တိုင်း သိပ်ပျော်တတ်တဲ့၊ သင်္ကြန်ကာလကိုလည်း သိပ်ချစ်တတ်တဲ့ နွေဦးတစ်ယောက် အချိန်ကာလတွေ ပြောင်းလဲလာတဲ့နဲ့အမျှ၊ အသက်အရွယ်တွေ ရင့်ကျက်လာတာနဲ့အမျှ ငယ်ငယ်တုန်းကလို မဏ္ဍပ်ထိုင်ပြီး ရေပက်ကစားတာမျိုး မလုပ်ဖြစ်တော့ပေမယ့်၊ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စုပြီး ရေပက်ခံမထွက်ဖြစ်တော့ပေမယ့်၊ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း မပျက်မကွက် ပွဲကြည့်ပရိတ်သတ်အနေနဲ့ ဖျော်ဖြေရေးစင်မြင့်ဘေးမှာ ထိုင်ကြည့်ခဲ့ရတာ သင်္ကြန်ဆိုတာကို သမီးလေးသိတတ်တဲ့အရွယ်ကတည်းကပေါ့။
အမေတူသမီးပီပီ သင်္ကြန်ရောက်ရင် သိပ်ပျော်နေတတ်တဲ့ သမီးလေးရဲ့ ဝါသနာကို မြေတောင်မြှောက်ပေးရင်း ကောင်းရာမွန်ရာဘက်ရောက်အောင် ပဲ့ပြင်ပေးရင်းနဲ့ ဖျော်ဖြေရေးစင်မြင့်နောက်မှာ နွေဦးရဲ့ သင်္ကြန်ရက်လေးတွေ ကုန်ဆုံးခဲ့တာ ဒီနှစ်နဲ့ဆိုရင် ဆယ့်သုံးနှစ်တောင်ရှိခဲ့ပြီပေါ့လေ။ ဖျော်ဖြေရေးစင်မြင့်ဘေး ပွဲကြည့်မဏ္ဍပ်ထဲမှာ ထိုင်ကြည့်နေတာကြောင့် နွေဦးအနေနဲ့ တစ်နေကုန်ရေစိုနေတာမျိုးတော့ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စင်မြင့်ပေါ်မှာ ယိမ်းကနေကြတဲ့ သင်္ကြန်မယ်လေးတွေနဲ့အတူ ကြွကြွလေးကနေ လှနေတဲ့ သမီးလေးရဲ့ အုပ်ထိန်းသူအဖြစ်နဲ့ပဲ ပီတိဖြစ်နေမိသည်။
"တီ... တီ... တီ... "
လက်ကိုင်အိတ်ထဲမှ မြည်လာတဲ့ ဖုန်းသံကြောင့် နွေဦးတစ်ယောက် အတွေးစပြတ်လို့သွားသည်။
"အဖေကြီးလား... လာမကြိုနဲ့ဦးလေ။ ဒီနေ့က နောက်ဆုံးနေ့ဆိုတော့ ဆုပေးတာတွေဘာတွေနဲ့ နောက်ကျမှာ။ အစီအစဉ်တွေ ပြီးခါနီးရင် ဖုံးပြန်ဆက်လိုက်မယ်နော်။ "
သင်္ကြန်ရက်တွေ အိမ်မှာတစ်ယောက်တည်း ကျန်ရစ်ရင်း တရားမှတ်၊ ပုတီးစိပ်နေတတ်သည့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို အကျိုးအကြောင်းပြောပြီး ဖုန်းချလိုက်သည်။ သီချင်းသံတွေနဲ့ဆိုတော့ တော်တော်လေးအားစိုက်နားထောင်ရသည်လေ။
တစ်ခါတစ်ခါတော့ နွေဦးတွေးမိတာလည်းရှိသည်။ သင်္ကြန်လိုအခါကြီးရက်ကြီးတိုင်း သမီးကို ရင်အုပ်မကွာ စောင့်ရှောက်ရင်းနှင့်ပင် အဖေရောအမေပါ ကုသိုလ်ရေးတွေ လျော့ပါးနေရသည်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကိုယ်ခွဲမရှိတဲ့ အခါဘယ်တတ်နိုင်မှာလဲ။ တစ်ဆယ့်ရှစ်နှစ်အရွယ် အလှသွေးကြွယ်နေတဲ့ သမီးလေးအတွက် မိဘရင်အုပ်ထက် ဘယ်အရာကများ လုံခြုံစိတ်ချရမှာလဲလို့ တွေးမိပြန်တော့ ကျန်တာတွေအားလုံး ခေါင်းထဲကပျောက်သွားကြသည်။ ဒီအရွယ်မှာ လမ်းကောင်းကိုဖြောင့်အောင် လျှောက်နိုင်ရေး ထိန်းကျောင်းပေးနိုင်ဖို့ကသာ အရေးအကြီးဆုံးမဟုတ်လား။
နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့တော့ တစ်မိသားစုလုံး ဘုရားသွားကျောင်းတက်၊ လှူရေးတန်းရေးတွေနဲ့ မအားနိုင်ပေမယ့် ကြည်နူးပီတိဖြစ်ရဦးမည်။ အဲ့ဒီအတွက်လည်း မျိုးစေ့ကောင်းချပေးခဲ့တဲ့ မိဘဘိုးဘွားတွေကို နွေဦးကျေးဇူးတင်မိပြန်ပါသေးသည်။ အစဉ်အဆက် လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့တဲ့ ကောင်းသောအမွေအနှစ်တွေကို နွေဦးတို့လက်ထက်အထိ သယ်ဆောင်ခွင့်ရခဲ့သလို သမီးလေးလက်ထက်ကျရင်လည်း ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းချင်စိတ်ရှိအောင် နားဝင်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးဖို့ နွေဦးမှာလည်း တာဝန်ရှိနေသည်ဟု ခံယူထားမိသည်။
သင်္ကြန်ရဲ့ သဘာဝရာသီဥတုကြောင့်ပဲ ထင်ပါရဲ့။ ညနေစောင်းလာတော့ နည်းနည်းလေးချမ်းစိမ့်စိမ့် ဖြစ်လာသလိုခံစားရသည်။
နောက်ကျောဘက်ကပ်လျက် ကြားလိုက်ရတဲ့အသံကြောင့် လှည့်ကြည့်မိတော့ သမီးနဲ့ရွယ်တူလောက်ရှိမယ့် လူငယ်လေးတစ်ဦး။ ဂျင်းဘောင်းဘီအရှည် အနေတော်ကြည့်ကောင်းရုံလောက်နဲ့ တီရှပ်ကိုပေါ်က သားရေဂျာကင်ထပ်ပြီး ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ ခေတ်လူငယ်လေးတစ်ဦးဆီက "ရေကန်တော့ချင်လို့ " ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းမျိုး ကြားရသည့်အတွက် အံ့ဩမိသလို ဒီလိုလူငယ်တွေလည်း ရှိသေးသားပဲဟု တွေးမိသေးသည်။
"အော် အေးအေး ရတယ်သား... သာဓုပါကွယ်... "
ရေလောင်းခွင့်ပေးရင်း သမီးဖေဖေငယ်ငယ်ကလည်း မိသားစုနဲ့အတူ မဏ္ဍပ်မှာ စတုဒီသာကူလုပ်ရင်း အလုပ်များနေတဲ့ နွေဦးဆီကိုလာရင်း အနားမှာရှိနေတဲ့ မေမေ့ကို ဒီလိုပဲ ရေကန်တော့ခွင့်တောင်းတာ သတိရသွားတော့ စင်ပေါ်မှာကနေတဲ့ သမီးလေးဆီဝေ့ကနဲ မျက်စိရောက်သွားရသည်။ သမီးလေးကတော့ သီချင်းသံနဲ့အတူ ဘာကိုမှသိရှာပုံမရသလို ကြွကြွလှလှ စည်းချက်ကျကျကနေဆဲ...။
သောက်ရေသန့်ဘူး အသေးလေးနဲ့ ရေစွတ်ရုံလေးလောင်းခံလိုက်ရပေမယ့် စိတ်ထဲမှာတော့ အတာသင်္ကြန်ရဲ့ အနှစ်သာရတွေ ပြည့်ဝလို့ အေးမြမြကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ သင်္ကြန်ဆိုတာ ပျော်ဖို့သက်သက် ရေကစားကြတာမဟုတ်ဘဲ နှစ်သစ်မှာအညစ်အကြေးတွေ ကင်းပါစေ၊ အေချမ်းပါစေဆိုတဲ့ စေတနာတွေ ပေါင်းစပ်ပါဝင်နေကြောင်း နောင်လာနောက်သားတွေ ဆက်လက်နားလည် ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ ရှေ့လူတွေကလည်း လက်လှမ်းမီရာ ဖြန့်ဝေကြရမည်။ ခေတ်တွေ စနစ်တွေ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာလို့ ခေတ်လူငယ်တွေကလည်း ခေတ်နဲ့လျော်ညီစွာ ပျော်ကြတယ်ဆိုပေမယ့် ကောင်းမွန်တဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်းလေးတွေ၊ ချစ်စရာအလေ့အထလေးတွေကိုတော့ ခေတ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးအောက်မှာ မပယ်ဖျက်မိကြစေဖို့တော့ ဂရုပြုကြရဦးမည်။
~~~ လောင်းလိုက်ကြစို့ ခါနွေသင်္ကြန်မီ သာယာစေမည် တို့မြန်ပြည်
မျိုးဂုဏ်ဆောင်မည် မောင်တွေရယ် မယ်တွေပါဆုချီ
ကောင်းသောနှစ် မင်္ဂလာခညောင်းမည် ~~~
ဖျော်ဖြေရေးစင်မြင့်ပေါ်က သီချင်းသံက နောက်ဆုံးအကျော့အနေဖြင့် လွင့်ပျံ့လို့ နေပါပြီ။ အခမ်းအနားမှုးကလည်း သင်္ကြန်အတက်နေ့ညရဲ့ နောက်ဆုံးအစီအစဉ်အဖြစ် ဒီသီချင်းပြီးရင် ယိမ်းအဖွဲ့ ဆုရစာရင်းများကို ကြေငြာမှဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားနေသလို မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာ နှစ်ဟောင်းကုန်ဆုံးလို့ နှစ်သစ်ကိုကူးပြောင်းတော့မယ့် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အတူ နိုင်ငံသားအပေါင်းအားလည်း နှစ်သစ်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းသံတွေကို ကြားနေရပါပြီ။
မဟာသင်္ကြန် အတက်နေ့ည၊ နှစ်ဟောင်းရဲ့ နောက်ဆုံးည၊ သင်္ကြန်လှပျိုဖြူလေးများရဲ့ နောက်ဆုံးယိမ်းအကကို ရင်သပ်ရှုမောရင်း နွေဦးရဲ့ စိတ်ထဲမှာလည်း ခုနက သီချင်းလေးလိုပဲ နာရီပိုင်းအတွင်းမှာ ကျရောက်တော့မယ့် မြန်မာနှစ်သစ်ဟာ အစစအရာရာ ကောင်းမွန်သော မင်္ဂလာရှိသော နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပါစေကြောင်း ဆုတွေတောင်းနေမိလျက်ပေါ့...။
မှတ်ချက်။ ။ဒီစာနှင့်အတူ ၁၉၉၈၊ ၁၉၉၉ နှစ်ကာလများဆီက သင်္ကြန်ရောက်တိုင်း ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဖျော်ဖြေရေးမဏ္ဍပ်၊ ရေကစားမဏ္ဍပ်မှာ မိဘအုပ်ထိန်းမှုနဲ့အတူ နေ့တိုင်း ပျော်ခွင့်ပေးတဲ့ ဖေဖေနဲ့မေမေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စွယ်တော်ရိပ်သင်္ကြန်မှာ ကပြဖျော်ဖြေနေတဲ့ မင်းသမီးလေးရွှေရည်သန်းရဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေကိုကြည့်ရင်း စဉ်းစားမိသွားတဲ့ ဇာတ်ကြောင်းလေးမို့လို့ ညီမလေးရွှေရည်သန်းကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
၁၇ ဧပြီ ၂၀၁၂
၁၃၇၄ ခုနှစ်၊ မြန်မာနှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့
စာရေးသူ - လွမ်းသုရင် at 2:16 PM 1 ဖတ်သူ့အမြင်
"နှင်းဆီပွင့်ဖတ် နီနီရဲရဲလေးတွေ ကျဲပက်ဖြန့်ခင်းထားတဲ့ ဖြူလွလွအိပ်ရာလေးပေါ်မှာ ထိရက်စရာမရှိအောင် နူးညံ့လှပတဲ့ မင်းသမီးလေးတစ်ပါး အိပ်ပျော်နေသတဲ့...။ အဲ့ဒီမင်းသမီးလေးကို ဘယ်လိုမှ နှိုးလို့မရလို့ လူပုလေးတွေက စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာ ခံစားနေရတုန်း တိုင်းခန်းလှည့်လည်လာတဲ့ အိမ်ရှေ့မင်းသားလေးက အိပ်ပျော်နေတဲ့ မင်းသမီးလေးကိုတွေ့ပြီး ချစ်ခင်သွားပါရော။ ချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့် မင်းသားလေးဟာ မင်းသမီးလေးရဲ့ နှင်းဆီငုံနှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို နမ်းလိုက်မိသတဲ့။ အဲ့ဒီလိုလည်း နမ်းလိုက်ရော မင်းသမီးလေးရဲ့ ခံတွင်းထဲက အဆိပ်ရှိတဲ့ ပန်းသီးစိပ်လေးထွက်လာပြီး မင်းသမီးလေးလည်း အိပ်ရာကနိုးလာ၊ နောက်တော့ မင်းသားလေးရဲ့ ကြင်ယာတော်အဖြစ် တစ်ပါတည်း ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကို ခံရပါသတဲ့..."
ဒဏ္ဍာရီလိုလို၊ ပုံပြင်လိုလို... စွဲအားကောင်းတဲ့ ချစ်သူရဲ့ လေယူလေသိမ်းမှာ မျောပါလို့ ကြည့်နူးဖွယ်ရာ ကျွန်မရဲ့ညဦးအချိန်လေးတွေ...
လူပုလေး ခုနစ်ယောက်နဲ့ မနှင်းဖြူ၊ ရွှေဖိနပ်ပိုင်ရှင်လေး စင်ဒရဲလား ဆိုတဲ့ ကလေးဘ၀ကတည်းက အသည်းစွဲခဲ့တဲ့ ပုံပြင်လေးတွေက ချစ်သူရဲ့ သာယာတဲ့အသံနဲ့ ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါ ကျွန်မအတွက်တော့ ဘယ်အခါမှ ရိုးမသွားနိုင်တဲ့ နားထောင်ချင်စဖွယ် ပုံပြင်လေးတွေပါပဲ။ တစ်ခါတစ်ခါ ကျွန်မတွေးမိတယ်။ ချစ်သူက သိပ်ပြီးပုံပြောကောင်းတယ်လို့။ ဒီလိုပြောလို့လည်း မဖြစ်သေးပါဘူး။ တော်ကြာကျွန်မကိုလည်း ပုံပြင်လှလှလေးတွေ ယုံအောင်ပြောသွားမှဖြင့်...။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မကတော့ ချစ်သူပြောနေကျ ပုံပြင်လေးတွေ နားထောင်ရတာကို နှစ်သက်နေမိသလို၊ "ကလေးလေးလိုပဲ" လို့ ကျွန်မအပေါ် ချစ်သူရဲ့မှတ်ချက်ကိုလည်း ကျေနပ်မိနေပါရော။ "ကလေးဆိုရင်လည်း ဘာလို့များ လက်ထပ်ဖို့ စိတ်ကူးသေးတုန်း" ဆိုတဲ့ အမေးကိုမေးမိတဲ့ ကျွန်မကရော လွန်များနေသလား။ ဒါပေမယ့်လည်း "ပုံပြင်ကြိုက်တဲ့ ကလေးမကို တစ်သက်လုံး ပုံတွေပြောပြနိုင်ဖို့ လက်ထပ်မှဖြစ်မှာကိုး" ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့လှလှပပ စကားလုံးလေးတွေအောက်မှာ ကျွန်မ ရင်တွေတလှပ်လှပ်ခုန်လို့၊ ကြင်နာယုယတဲ့ မျက်လုံးရွဲကြီးတွေအောက်မှာ ကျွန်မရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေး သေးငယ်ကျုံ့ဝင်လို့၊ သူ့အပေါ် တုံ့ပြန်ချစ်တွေနဲ့ လိုက်ပါစီးမြောလို့ပေါ့...။
ပုံပြင်လေးတွေကို နားထောင်နေကျ ကျွန်မက ပုံပြင်ထဲက မင်းသမီးလေးတွေကို တိတ်တိတ်လေးစွဲလမ်းနေမိတတ်တာ၊ စိတ်ကူးယဉ်နေမိတတ်တာလည်း မလွန်လောက်ပါဘူးနော်... ချစ်သူ။ မနှင်းဖြူလေးကို မြင်ယောင်မိတဲ့အခါ ကျွန်မက ဂါဝန်ဖြူဖြူလေးနဲ့ အပြစ်ကင်းတဲ့ ချစ်စရာမင်းသမီးလေးပေါ့။ ဒါဆို စင်ဒရဲလားကရော... ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်နဲ့ ရွှေရောင်ဂါဝန်ရှည်ကြီးကိုဝတ်ဆင်၊ ရွှေရောင်ဒေါက်ဖိနပ်လေးကို စီးလို့၊ ရွှေရောင် မှော်တံလေးကို ကိုင်ထားတဲ့ သိပ်လှတဲ့ရွှေမင်းသမီးလေး ဖြစ်နေပြန်ရော။ တကယ်လို့များကျွန်မက အဲ့ဒီလို မင်းသမီးလေးဆိုရင် ချစ်သူက ရွှေမင်းသားလေး ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်။ ရွှေဖိနပ်ပိုင်ရှင် ကျွန်မကို မတွေ့မချင်း လိုက်ရှာနေမယ့် ရွှေမင်းသားလေးပဲ ဖြစ်မှာပါပဲ။
တစ်ခါတစ်လေမှာ စိတ်ကူးယဉ်တာတွေဟာ တကယ်ဖြစ်လာတတ်တယ်။ ဒါကိုချစ်သူ ယုံရဲ့လားမသိပေမယ့် ကျွန်မကတော့ ယုံချင်နေမိတယ်...။
တကယ်ပါ...။ ကျွန်မတကယ်ပဲ ပတ္တမြားရောင်ရဲရဲ နှင်းဆီပန်းတွေကျဲထားတဲ့ ကြက်သွေးရောင် ကော်ဇောနီကြီးပေါ်မှာ ဖွဖွလေး လျှောက်လှမ်းနေမိတယ်။ ဖွေးဥပြီးသန့်စင်လွန်းတဲ့ အဖြူရောင်ဂါဝန်ရှည်ကို ဆင်မြန်းပြီး ငွေရောင်ဖိနပ်လေးကိုစီးလို့ ကော်ဇောပေါ်မှာ ကြွကြွလေး တလှမ်းချင်း လျှောက်နေတဲ့ ကျွန်မ။ နီစွေးစွေး နှင်းဆီပန်းစည်းလေးကို ညာလက်မှာ လှလှပပကိုင်လို့ ဘယ်လက်က ချစ်သူရဲ့ လက်မောင်းကို တင်းတင်းလေး ချိတ်တွဲလို့ ဟန်အပြည့်နဲ့လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ ကျွန်မက တကယ်ပဲ မင်းသမီးလေးတစ်ပါးလို လှပကျော့ရှင်းလို့။ ဆံထုံးအောက်မှာ တွဲခိုနေတဲ့ ပုဝါဖြူဖြူလေးက တစ်ချက်တစ်ချက် ပုံခုံးကို ခလုတ်တိုက်ပြီး ကျွန်မရဲ့ ကျောပြင်ပေါ်မှာ ဝေ့၀ဲကျနေသေးရဲ့။
ဟိုး မနီးမဝေးမှာ ပျံ့လွင့်နေတဲ့ သီချင်းသံလေးက နားထဲမှာ ကြားတစ်ချက်၊ မကြားတစ်ချက်။ လက်ဖ၀ါး လေးတွေက ရေခဲတမျှအေးစက်၊ အသက်ကိုပင် ရှူမိသလား၊ မရှူမိသလား သတိမထားမိတော့ပါဘူး။ ကြက်သွေးရောင် ကော်ဇောပေါ်က ချစ်သူရဲ့ တလှမ်းချင်းလှမ်းနေတဲ့ ခြေလှမ်းလေးတွေနောက်ကိုပဲ ကျွန်မကြိုးစားပြီး လိုက်လှမ်းနေရတယ်။ ခန်းမထဲကို မ၀ံ့မရဲ့ဝေ့ကြည့်လိုက်တော့ မျက်လုံးပေါင်းများစွာရဲ့ ဦးတည်ချက်က ချစ်သူနဲ့ကျွန်မဆီမှာ။ အဲ့ဒီမျက်လုံးတွေထဲမှာ နှစ်လိုအားကျတဲ့အရိပ်အရောင်တွေ၊ နှစ်သက်ကြည်နူးခြင်းတွေ၊ ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခြင်းတွေ၊ မျှဝေခံရတဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ... စုံလို့ပဲပေါ့။ အို...ကျွန်မရှက်လိုက်တာ။ ရှက်ရွံ့ခြင်းလား၊ ကြည်နူးခြင်းလား၊ ဂုဏ်ယူခြင်းလား အမျိုးအမည်သေချာ မဖော်ပြနိုင်တဲ့ ခံစားချက်တစ်ခုက ကင်မရာ ဖလက်ခ်ျဂန်း တဖျက်ဖျက်မီးရောင်တွေနဲ့အတူ ကျွန်မမျက်နှာကို ပန်းသွေးရောင်ဆိုးပေးသွားတယ်။
ဟော... ဒိတ်... ဒိတ်... ဒိတ်... တဲ့။ အဲ့ဒါ ကျွန်မရဲ့ ရင်ခုန်သံ။ ကိုယ့်ရင်ခုန်သံကို ကိုယ်တိုင်ပြန်ကြားနေရတဲ့အထိ ကျွန်မစိတ်တွေ လှုပ်ရှားနေပါလား။ အားကိုးတကြီးနဲ့ ချစ်သူမျက်နှာကို စွေစွေလေးလှမ်းကြည့်မိတော့ ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ စူးလက်တဲ့မျက်ဝန်းတွေ၊ ကြည်လင်ဝင်းပတဲ့ အပြုံးတွေတပွေ့တပိုက်နဲ့ ကျွန်မရဲ့ချစ်သူ။ အဲ့ဒီမျက်ဝန်းတွေ၊ အပြုံးတွေဟာ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ဂုဏ်ယူခြင်းတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်လို့ ကျွန်မအတွက် အရာရာပြီးပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ခွန်အားတွေကို ကျွန်မရဲ့နှလုံးသားထဲအထိ ဖြန့်ကျက်ခဲ့တာပေါ့။ ကျွန်မရဲ့ ပန်းနုရောင်နှုတ်ခမ်းပါးလေး မသိမသာ ကွေးညွှတ်သွားသလိုလို။ ဟောဒီခမ်းနားလှပတဲ့ခန်းမကြီး မဆုံးမချင်း၊ ကြက်သွေးရောင်ရင့်ရင့် ကော်ဇောမဆုံးမချင်း ချစ်သူရဲ့ ကြင်နာဖေးမခြင်းနဲ့ ပရိသတ်အလည်မှာ တင့်တင့်တယ်တယ် လျှောက်လှမ်းသွားမယ်လို့ ကျွန်မဆုံးဖြတ်လိုက်မိတယ်။
အဲ့ဒီတဒင်္ဂလေး၊ ခဏတာနာရီပိုင်းလေးမှာ ကျွန်မဟာတကယ်ပဲ ဒဏ္ဍာရီထဲကလို၊ ပုံပြင်ထဲကလို တလောကလုံးမှာ အလှဆုံး၊ အချောဆုံး၊ ရွှေမင်းသားလေးက သိပ်မြတ်နိုးတဲ့ မင်းသမီးလေးလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျေနပ်နေခဲ့တယ်၊ စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းတွေနဲ့အတူ ကြည်နူးနေခဲ့တယ် ဆိုတာကိုတော့ မညာချင်ပါဘူး ချစ်သူ။ တကယ်တော့ ပုံပြင်ကြိုက်တဲ့ ကျွန်မအတွက် မဆုံးနိုင်တဲ့ ပုံပြင်ရှည်ကြီးကိုပြောဖို့ ချစ်သူရဲ့ ယုယခြင်း၊ ချစ်ခြင်းတွေနဲ့ နိဒါန်းပျိုးလို့ ကြင်နာခြင်းတွေနဲ့ ဖေးမခေါ်ငင်ခဲ့ပြီလေ။
ကျွန်မပြောခဲ့ပါရော... ချစ်သူက ပုံပြောကောင်းပါတယ် လို့။
သူပြောတဲ့ ပုံပြင်ရှည်ထဲမှာတော့ ချစ်သူက ကျွန်မချစ်တဲ့ ရွှေမင်းသားလေးပေါ့။ ကျွန်မကရော... တစ်ခါတစ်ခါ မနှင်းဖြူလေး ဖြစ်ရသလို၊ တစ်ခါတစ်ခါလည်း ရွှေဖိနပ်ပိုင်ရှင် စင်ဒရဲလားလေး ဖြစ်လို့ပေါ့...။
၁၄ မတ် ၂၀၁၂
စာရေးသူ - လွမ်းသုရင် at 9:25 PM3ဖတ်သူ့အမြင်
"ချစ်သူနဲ့ လက်ချင်းချိတ်ပြီး သွားတဲ့အခါ ဘယ်လောက်ဝေးဝေး ပင်ပန်းတယ်လို့ မထင်ရဘူးတဲ့။ အဲ့ဒီစကားကို ဘယ်သူပြောသလဲ။ ခုတော့လည်း မောတာပါပဲနော်..."
လူကူးတံတားတစ်ခုကို ဖြတ်ကျော်ရင်း သူ့မျက်နှာကိုတွေတွေလေးကြည့်ကာ သူမညည်းမိခြင်း ဖြစ်၏။
မိုးရွာပြီးခါစ ပတ်ဝန်းကျင်က အနည်းငယ် စိမ့်နေသော်လည်း သူမ၏နဖူးလေးမှာတော့ ချွေးပေါက်လေးများ သီလို့နေသည်။ လက်ဖ၀ါးနုနုကို အားမရစွာ ဖျစ်လိုက်သည့် သူ့အပြုံးက သူမ၏ ညည်းညူခြင်းကို သဘောကျသော အပြုံးမျိုး...။
"ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျတဲ့အခါ ချစ်သူလက်ကိုဆွဲကိုင်ထား... အကျင့်ပါသွားခဲ့တာ ချစ်သူမရှိတော့ လက်မှိုင်ချ.."
စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ရဲ့ "အချစ်သီချင်း"ကို စိတ်ထဲမှ သတိရမိသည်။ တကယ်တော့ ဒီလမ်းဒီခရီးတွေကို သူမတစ်ယောက်တည်း သွားမြဲသွားနေကြဖြစ်ခဲ့သည်။ တခါတလေမဟုတ်ခဲ့၊ တစ်နေ့တလေ မဟုတ်ခဲ့။ နှစ်နှင့်လနှင့်ချီပြီး လှုပ်ရှားရုန်းကန်ခဲ့ရာ ဒီလမ်းလေးတွေမှာ သူမ၏ခြေရာပေါင်း မြောက်များစွာ ထင်ကျန်ရစ်ဖူးမည်။
တစ်နေ့တစ်နေ့ လူကူးတံတား လက်ရမ်းကို အားပြုပြီး အတက်အဆင်းပြုခဲ့ရသည့် နေ့တွေကို သူမသတိရသွားမိ၏။
"အဲ့ဒီတုန်းကအဖြစ်တွေ ပြန်စဉ်းစားရင် မျက်စိသူငယ်နားသူငယ်နဲ့ ကိုယ့်အဖြစ်ကိုကိုယ် သနားနေမိတယ် သိလား... "
Bus ကားတွေအများကြီး စုဝေးနေသည့် ကားဂိတ်တစ်နေရာကိုကြည့်ပြီး သူမရေရွတ်မိပြန်သည်။
"စိတ်မကောင်းစရာ အတိတ်တွေကို ဆက်မယူလာနဲ့တော့လေ။ လက်ရှိအချိန်မှာ ပျော်အောင်နေမှပေါ့..."
သတိရတိုင်း အတိတ်ကို ပြန်လည်တူးဆွတတ်သည့် သူမကို သူက သတိပေးသည်။ တကယ်တော့လည်း အတိတ်ဆိုတာ ပြန်လည်တူးဆွတိုင်း ကောင်းတတ်သည့် အရာမှမဟုတ်ဘဲ။ သို့သော်လည်း သူမအတွက်တော့ ဘ၀မှတ်တမ်းတစ်ခု...။
"ပြန်တူးဆွနေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မမေ့သွားအောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သတိပေးနေတာပါ။ ဒီနေ့ ဒီလိုအခြေအနေရောက်လာတာဟာ အဲ့ဒီအတိတ်တွေကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့လို့ပဲပေါ့။ အဲ့ဒီလောက်ထိ ဆိုးရွားတဲ့ အခြေအနေထိတောင် ငါတစ်ယောက်တည်း ရုန်းကန်ခဲ့ရဖူးတယ် ဆိုတာကို သတိရတိုင်း ခုလက်ရှိ ဖြစ်ပျက်နေတာဟာ မပြောပလောက်တဲ့အရာတွေပါလို့ တွေးမိပြီး ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကို အားပြန်မွေးနေရတာ..."
၀မ်းနည်းစရာတွေကို ပြန်မစဉ်းစားစေချင်သည့် ချစ်သူ၏စေတနာကို သူမ နားလည်သည်။ သို့သော်လည်း...
မနက်စောစောစီးစီး မျက်နှာသစ်ပြီး အသေပိတ်ထားသည့် ဇီးရောင် မှန်တံခါးမှ အပြင်သို့ မျှော်ကြည့်မိသည်။ ကြည့်မိတော့မှ သူမနားနေရာ အခန်းကျဉ်းကလေးသည် လမ်းမကြီးကို မျက်နှာမူထားသည် မဟုတ်ဘဲ တိုက်နောက်ဘက် Car Parking တစ်ခုကို မျက်နှာမူထားမှန်း သူမသတိထားမိ၏။ ညက မောမောနှင့် အိပ်ပျော်သွားသောကြောင့် သူမသတိမထားမိခြင်း ဖြစ်လိမ့်မည်ထင်သည်။ အခန်းဖော်နှစ်ယောက်ကတော့ အခုထိ အိပ်မောကျဆဲ...။
"ဒီလိုအခန်းလေးကိုပဲ ငါ့အိမ်လို့ သတ်မှတ်ရတောမယ်နဲ့ တူပါရဲ့..."
ဆယ့်နှစ်ပေ ပတ်လည်လောက်ရှိမည့် လေးထောင့်အခန်းကျဉ်းကလေး...။ အိပ်စက်စရာ လူလေးယောက်အိပ်စာ နှစ်ထပ်ခုတင်တစ်လုံး ရှိသည်။ အပျင်းပြေ ကြည့်စရာ ရုပ်မြင်သံကြားစက်တစ်ခုရှိသည်။ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာတွဲလျက်ရှိသောကြောင့် အိမ်မကြီးသို့ အကြောင်းမရှိလျင် ခဏခဏထွက်ရန်မလို။ သူမနှင့်ပါဆိုလျှင် စုစုပေါင်းမိန်းကလေး သုံးယောက်နေထိုင်ရမည့် အခန်းကလေးထဲတွင် အ၀တ်အစားအိတ်များ၊ စာအုပ်စာတမ်းများဖြင့် ပြည့်ကျပ်နေ၏။ ညအိပ်ခါနီး အဖော်ရအောင် ဘေးနားမှာထားထားသည့် အရုပ်ကလေးက ခုတင်ပေါ်မှာ ငြိမ်သက်လို့...။
အိပ်ရာထထခြင်း Car Parking မှာထိုးထားသည့် ကားတွေကိုမြင်တော့ အဖေ့ကားလေးကို သတိရသည်။ ဒီအချိန်ဆိုလျှင် အဖေ့ကားစက်နှိုးသံကို ကြားရတတ်သည်။ သားသမီးတွေကို အိပ်ရာထဖို့ ဗျစ်တောက်ဗျစ်တောက် နှိုးနေသည့် အမေ့ရဲ့ နံနက်ချိန်ခါတေးသံသာကို ကြားယောင်နေမိသည်။ နှစ်ယောက်အိပ်ခုတင်မှာ တစ်ယောက်တည်း အိပ်စက်နေမည့် ညီမငယ်ကိုမြင်ယောင်မိသည်။ ခုတော့လည်း ဒီအခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာ သူစိမ်းတစ်ရံဆံတွေနဲ့ သူမတစ်ယောက်တည်းရယ်...။ အားငယ်စိတ်ကြောင့် မျက်ရည်ဝဲတက်လာမိသည်။
"ဒီမြေဒီရေမှာ ငါ့ကိုယ်ငါပဲ အားကိုးရမယ်။ ငါ့မှာ ဘယ်သူမှ အားကိုးစရာ မရှိဘူးပဲ...။"
ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ် အားတင်းလိုက်ရင်း ရေချိုးဖို့ပြင်လိုက်တော့မှ ဗိုက်ထဲမှ "ဂွီ"ကနဲ အသံကိုကြားလိုက်ရ၏။ သည်အချိန်ထိ သူမနံနက်စာမစားရသေး။ ရေချိုးထားတုန်း ခေါက်ဆွဲပြုတ်ထားမှဖြစ်မည်။ စားစရာသပ်သပ်ထည့်လာသည့် အိတ်ထဲမှ ခေါက်ဆွဲခြောက်တစ်ထုပ်ကို နှိုက်ယူပြီး မီးဖိုထဲရှိ ဆူပြီးဟန်ရှိသော ရေနွေးပူပူနှင့် ပန်းကန်လုံးထဲထည့်ရောကာ အဖုံးအုပ်ထားလိုက်သည်။ ဒီနေ့အဖို့ သူမအတွက် အမေ့ရိက္ခာခြောက်တွေနှင့်သာ အသက်ဆက်စရာရှိသည်။ ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ သူမ မကျင်လည်သေး။ ထမင်းဆိုင် ဘယ်နားမှာရှိသလဲ သူမမသိသေး။ ဈေးဘယ်နားမှာ ၀ယ်ရမည်လဲ၊ ဘယ်လိုဝယ်ရမည်လဲ သူမ မသိသေး။ မီးရထား၊ ကားဘယ်လိုစီးရမည်လဲ သူမ မတတ်သေး။
သက်ပြင်းတစ်ချက်ကို ခပ်ပြင်းပြင်းမှုတ်ထုတ်ရင်း လေးလံသောခြေလှမ်းဖြင့် ရေချိုးခန်းသို့ ၀င်ခဲ့သည်။ ရေချိုးပြီးလျှင် အလုပ်နှင့်နီးသည့် ရပ်ကွက်တစ်ခုမှာ ပြောင်းနေဖို့ သူမကို လိုက်ပို့သည့် မိတ်ဆွေဦးလေး လာခေါ်သည်ကို စောင့်ရဦးမည်။ တကယ်တော့ သူမ နေရမည့်အခန်းက လက်ရှိအခန်း။ အလုပ်နှင့်အိမ် လေးဆယ့်ငါးမိနစ်ခန့် ရထားစီးရမည် ဆိုသည့်ခရီးကြောင့် ဒီအိမ်ကနေ ရွှေ့ဖို့သူမဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အသွားအပြန် တစ်နာရီခွဲခန့်ကြာမည့် အချိန်နှင့် ခရီးစရိတ်ကို တွက်ဆမိတော့ ဆက်နေလို့မဖြစ်နိုင်မှန်း သေချာသွားသည်။ သူမအတွက် အခုအချိန်မှာ ငွေကိုချွေတာနိုင်မှ တန်ကာကျမည် မဟုတ်လား။
ပထမဆုံးအကြိမ်တစ်ယောက်တည်း စားရသည့် ထိုနေ့ကနေ့လည်စာအတွက် သူမ မျက်ရည်ကျမိသည်။ သူမလိုပဲ အမေလည်း ငိုနေမည်လားမသိ။ ကိုယ်တိုင်ရွေးခဲ့သည့် လမ်းက ရာနှုန်းပြည့်မချောမွေ့နိုင်မှန်းတော့ အစကတည်းက သိခဲ့သော်လည်း လက်တွေ့မှာ ရင်ဆိုင်နိုင်ပါ့မလားဆိုသည့် အတွေးတို့က ရောက်ရောက်လာသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မှားသလား၊ မှန်သလား ဝေခွဲလို့မရ ဖြစ်လာရသည်။
"မှန်ရင်လည်း ငါစံရမှာပဲ၊ မှားရင်လည်း ငါတစ်ယောက်တည်း ခါးစည်းခံရမှာပဲ။ ခုချိန်မှာ နောက်ပြန်ဆုတ်လို့မှ မရနိုင်တော့ပဲ။ ဒီခရီးကို ငါကိုယ်တိုင် အစပျိုးမိခဲ့ပြီလေ..."
သူမ၏ဆန္ဒတစ်ခုအတွက် အရင်းအနှီးဘယ်လောက် ကြီးသလဲဆိုတာ သူမအသိဆုံးဖြစ်သည်။ မိသားစုတစ်ခုလုံး၏အခြေအနေသည် သူမ၏အဆုံးအဖြတ်တစ်ခုပေါ် မူတည်နေပြီ။ နောက်ဆုတ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်။ ဘယ်နည်းနှင့် ဖြစ်ဖြစ် ရှေ့ဆက်ဖို့သာရှိသည်။
နေ့လည်ရောက်တော့ မိတ်ဆွေဦးလေးက အိမ်ရွှေ့ဖို့လာခေါ်၏။ ဒီအခန်းလေးထဲမှာ မနေရတော့သည်ကတော့ သေချာသွားပြီ။ ပါလာသမျှ အထုပ်အပိုးတွေကို ဆွဲပြီး ဦးလေးခေါ်ရာကို သူမလိုက်ခဲ့သည်။ တက္ကစီစီးလာရာ လမ်းတစ်လျှောက် လမ်းဘေးဝဲယာရှုခင်းတွေက အမြင်ဆန်းသလို ရှိသော်လည်း အေးစက်စက်နိုင်သလို ထင်မိသေး၏။ မိခင်မြေနှင့်တော့ ဆီနှင့်ရေလို ကွာခြားနေသည်။
ဒီမြေသည် မိခင်မြေထက် မွမ်းမံပြင်ဆင်မှုတွေ များကောင်းများမည်။ Artificial အလှအပတွေနှင့် ပိုမိုသပ်ရပ်လှပသယောင် ရှိချင်လည်းရှိမည်။ ပိုမိုတိုးတက်သည်ဟုလည်း ထင်ကောင်းထင်စရာရှိလိမ့်ဦးမည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ သူမအတွက်တော့ မိခင်မြေကိုသာ တမ်းတနေမိတော့သည်။ စွဲစွဲလမ်းလမ်း ဖတ်ခဲ့ဖူးသည့် ဆရာတက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်၏ "စိမ်းနေဦးမည့် ကျွန်တော့မြေ"မှ နိဒါန်းစာပိုဒ်လေးတစ်ပိုဒ်ကိုလည်း ပြန်လည်သတိရနေမိသည်။
"မြင်မြင်ရာရာ စိမ်းစိုလှပနေသည့် မိခင်မြေ..."
တစ်နေ့နေ့ပြန်ရမည် ဆိုသည်ကို သိသော်လည်း အဲ့ဒီတစ်နေ့နေ့သည် မည်မျှကြာသွားနိုင်သည်ကို သူမ မခန့်မှန်းတတ်။
"မပျော် သုံးနှစ် ပျော်သုံးနှစ်ပေါ့ အမေရယ်... သမီး ပြန်လာမှာတော့ သေချာပါတယ်..."
တက္ကစီလေးကတော့ အဝေးပြေးလမ်းမလို လမ်းမကျယ်ကြီးတစ်လျှောက် တရွေ့ရွေ့ပြေးကာနေတော့သည်။
( ဆက်ပါဦးမည်။ )
၁၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၉
စာရေးသူ - လွမ်းသုရင် at 2:06 PM 12 ဖတ်သူ့အမြင်
လွမ်းသုရင်... လွမ်းနေတတ်သူ တစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေကို သိစေချင်တဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုတည်းနဲ့ အသုံးပြုဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကလောင်နာမည်လေး...
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ အတန်းထဲမှာ စာစီစာကုံး အရေးကောင်းတယ်လို့ ဆရာ၊ဆရာမတွေက ပြောကြတယ်။ ကျွန်မက စကားပြောတဲ့နေရာမှာတော့ မကျွမ်းကျင်ခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘာအကြောင်းအရာကိုမဆို စာပိုဒ်တစ်ခုအနေနဲ့ ရေးခိုင်းရင်တော့ စိတ်တိုင်းကျ စီကာပတ်ကုံး ရေးလေ့ရှိတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသူဘ၀ကို ရောက်လာတော့ ကျွန်မရဲ့ အားသာချက်တစ်ခုက ကျက်စာထက် ကိုယ်တိုင်စာစီပြီးရေးလို့ရတဲ့ ဘာသာရပ်မျိုးမှာ ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်။ ဘောဂဗေဒလို ၏သည်မလွဲ ကျက်ရတဲ့ ဘာသာရပ်ထက် နားလည်အောင်ဖတ်ပြီး ကိုယ့်စာကြောင်းနဲ့ကိုယ် ပြန်ပြီးတင်ပြရေးသားလို့ရတဲ့ မြန်မာစာ စကားပြေ၊ ကဗျာ၊ ဘာသာရပ်တွေမှာ ပိုပြီး အာရုံစူးစိုက်မှု ပြင်းထန်ခဲ့တယ်။ စာစီစာကုံး ရေးအားလည်း ကောင်းခဲ့တယ်။
ကျွန်မရဲ့ စရိုက်ကိုက ဘောပင်တစ်ချောင်း၊ စာတစ်အုပ်နဲ့ အလုပ်လုပ်နေတာကိုပဲ နှစ်သက်တယ်ထင်ပါရဲ့။ မြန်မာစာမှာ စာစီစာကုံး ရေးနေရတာကို နှစ်သက်သလို အမြဲတွက်နေရတဲ့
သင်္ချာဘာသာကိုလည်း မွေ့လျော်ပြန်တယ်။ ပုံလေးတွေ ဆွဲနေရတဲ့ ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်မျိုးကို စိတ်ဝင်စားနေတတ်တယ်။ ဒါကြောင့်ပဲလားတော့ မပြောတတ်ပါဘူး။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်တော့ မြန်မာစာနဲ့ သိပ္ပံဘာသာရပ် ဂုဏ်ထူးနဲ့ အောင်ခဲ့တယ်။ အားအခဲထားခဲ့ဆုံး သင်္ချာဘာသာကတော့ ဂုဏ်ထူးမပါခဲ့ဘူး။
ဒီလိုနဲ့ တဇွတ်ထိုးသမား ကျွန်မရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ လမ်းက အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်၊ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်...။ T-Square တစ်ခု၊ ခဲတံတစ်ချောင်း၊ စာရွက်တစ်ရွက်နဲ့ အိမ်ပုံစံလေးတွေကို စိတ်ဝင်တစ်စား ရေးဆွဲခဲ့တယ်။ ဂဏာန်းပေါင်းစက်တစ်ခု၊ အိမ်ပုံစံတစ်ခုနဲ့ အိမ်တစ်လုံးရဲ့ ခန့်ှမှန်းချေ ကုန်ကျစရိတ်တွေကို တိတိကျကျ တွက်ချက်ခဲ့တယ်။ သစ်တွေ၊ သံမဏိတွေရဲ့ သဘာဝတွေ၊ သတ္တိတွေ၊ ခံနိုင်အားတွေကို တွက်ချက်ခဲ့တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဆိုတဲ့ ဘ၀ကို မြတ်မြတ်နိုးနိုး ခံယူချင်ခဲ့တယ်။ အုတ်တွေ၊ သဲတွေနဲ့ လက်တွေ့လုပ်ရခြင်းကို ပျော်ပိုက်ခဲ့တယ်။ နေပူမိုးရွာမရှောင် ကျောင်းဝင်းထဲမှာ မြေတိုင်းဆင်းရတဲ့ အချိန်တွေကို ဂုဏ်ယူခဲ့တယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကျွန်မရဲ့ အပြင်းထန်ဆုံး ဆန္ဒက နည်းပညာဘွဲ့ကိုရယူဖို့။ မြို့ပြဘာသာရပ်ကို ရေဆုံး မြေဆုံးလေ့လာဖို့။ တစ်နေ့မှာ နည်းပညာတက္ကသိုလ်က မွေးထုတ်လိုက်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားတွေကို ဘွဲ့အပ်နှင်းရတဲ့ ပါမောက္ခချုပ်...။
ဂျီတီအိုင် ကျောင်းသူဘ၀မှာ ကျွန်မရဲ့ စိတ်ကူးတွေ၊ ရင်ခုန်သံတွေ ကနေဖြစ်တည်လာတာက ကဗျာလေးတွေ။ စိတ်ကူးပေါက်ရာလေးတွေကို ဘောပင်လေးနဲ့ ချရေးလိုက်တော့ ကာရံလေးတွေ စီစီရီရီကျလို့ ကဗျာလေးတွေ စာရွက်ပေါ်မှာ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ကျွန်မ အဲ့ဒီလို လျှောက်ရေးတတ်တာကို သိတဲ့ ၀ါသနာတူ သူငယ်ချင်းသက်ပိုင်သူ၊ မြရေလျဉ်တို့ စုပြီး ကဗျာစာအုပ်လေးလုပ်ကြတဲ့အခါ အတင်းခေါ်ပြီး ကဗျာရေးခိုင်းတာနဲ့ ကလောင်နံမယ်လေးတစ်ခု ရွေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မရဲ့ ကဗျာလေးတွေက အလွမ်းကဗျာလေးတွေ များခဲ့တော့ လွမ်းနေတတ်သူ တစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေကို သိစေချင်တဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုတည်းနဲ့ 'လွမ်းသုရင်' ရယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်။
ကံကြမ္မာက အကြောင်းမပါလေတော့ အခုအချိန်မှာ ကျွန်မတစ်ယောက် ပါမောက္ခချုပ် ဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘဲ စင်ကာပူဆိုတဲ့ နေရာကိုရောက်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မမြတ်နိုးတဲ့ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့တယ်။ ပညာလောဘကြီးရာကနေ၊ အခြေအနေအရ စီးပွားရေး သောင်းကျန်းရတော့တယ်။ အင်တာနက်တွေ လိုသလိုအသုံးပြုလို့ ရနေလေတော့ ဘလော့ခ်တွေ ခေတ်စားလာတဲ့အခါ ကျွန်မအကြောင်းကိုသိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက စာရေးဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တယ်။
ဘလော့ခ်ရေးဖို့ စဉ်းစားတုန်းကတော့ "လွမ်းသုရင်" လို့ပေးမလို့ပါ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအချိန်မှာ အစ်ကို စိုးမိုးက "အစိမ်းရောင် မိန်းကလေး" ကိုဖန်ဆင်းပေးခဲ့ပြီးပြီ ဖြစ်နေတော့ ရစ်တွယ်မိသော မောင်နှမသံယောဇဉ်ကြောင့် အစိမ်းရောင် မိန်းကလေးဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားခဲ့မိပါတယ်။ အစိမ်းရောင် မိန်းကလေးအဖြစ် သိလာခဲ့ပြီးမှ တစ်ချိန်က ထားခဲ့ဖူးတဲ့ ဆန္ဒလေးတစ်ခုကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ လွမ်းသုရင်ကိုပြန်လည် အသက်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီဆန္ဒလေးက ဘာလဲဆိုတော့ တစ်နေ့နေ့မှာ စာပေလောကနဲ့များ ဆက်စပ်မိခဲ့ရင် ဒီနာမည်လေးပဲ ဆက်ယူသွားဖို့ပါပဲ။ တကယ်တော့ "အစိမ်းရောင်မိန်းကလေး"ဆိုတာ ဘလော့ခ်စာမျက်နှာပေါ်ကို အရင်ရောက်ခဲ့ပေမယ့် ကျွန်မရဲ့ကလောင်ဦးဟာ "လွမ်းသုရင်" ပါ။
အစိမ်းရောင်မိန်းကလေး အဖြစ် ရင်းနှီးတဲ့သူတွေကတော့ "စိမ်း" ဆိုတဲ့စာလုံးပါတဲ့ နာမည်အမျိုးမျိုးကို ခေါ်တတ်ကြပါတယ်။
မောင်လေး၊ ညီမလေးတွေကတော့ မမစိမ်း လို့ခေါ်တာများတယ်။ ညီကတော့ မမဂွင်းဂဲလ် တဲ့။ တီချယ်ကတော့ စိမ်း လို့ခေါ်တယ်။ ကိုရင်နော်နဲ့ မမခင်လေးကခေါ်တော့ စိမ်းစိမ်း ။ ကိုမိုးမောင်ကတော့ မစိမ်းမေ ဆိုပဲ။ သက်ပိုင်သူက စိမ်းတိမ်းတိမ်းလို့ ခေါ်ပြန်တယ်။ ကိုနေလင်းကတော့ မဂရင်း တဲ့။ မြရေလျဉ်တို့၊ ဖိုးသင်္ကြန်တို့ကတော့ ခေါ်နေကြအတိုင်း မလဲ့ ပေါ့လေ။ အစ်ကို ကိုမိုးမြင့်တိမ်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ခြောက်နှစ်ကတည်းကအတိုင်း ညီမလေး လို့ပဲခေါ်တယ်။ ကိုရှင်ရဲထွတ် နဲ့ ကိုရင်နော်က တစ်ခါတစ်ခါ သုသု လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်။
ဘယ်လိုပဲခေါ်ခေါ်ပါ။ နာမည်နှစ်ခုလုံးဟာ ကျွန်မနှစ်သက်မြတ်နိုးတာပဲမို့လို့ ကျေနပ်ပါတယ်။ ဒီပို့စ်လေးအတွက် မမ မနော်ဟရီကိုလည်း ကျေးဇူးပါနော်။
စာကြွင်း။ ။ ဘလော့ခ်စလုပ်ကာစက အစိမ်းရောင်မိန်းကလေး ဆိုတာကို မေးတဲ့သူတွေ ရှိတာကြောင့် အဲ့ဒီနာမည်အတွက် ပို့စ်တစ်ခု ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီတက်ဂ်ဂိမ်း ဖြစ်လာတဲ့အခါ ကျွန်မကိုများ တက်ဂ်ခဲ့ရင် အသစ်ရေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ ထင်ထားခဲ့တာ။ ဒါပေမယ့် မမ မနော်ဟရီက လွမ်းသုရင် ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ သတိတရ တက်ဂ်လာတဲ့အတွက် လွမ်းသုရင်ဘလော့ခ်အစမှာ ရေးထားဖူးတာကို အနည်းငယ်ပြုပြင်ဖြည့်စွက်ပြီး ပြန်ရေးလိုက်တာပါ။
စာရေးသူ - လွမ်းသုရင် at 10:40 PM5ဖတ်သူ့အမြင်
ဘယ်တော့မှ မနက်စောစော အိပ်ရာကမနိုးတတ်တဲ့သူမ... ဒီနေ့တော့ စောစောစီးစီး မျက်လုံးတစ်စုံက ပြန်မှိတ်လို့မရအောင်ကို လန်းဆန်းနေသည်။ တွေ့ရခဲ့သော နံနက်ခင်း၏ အလှကို မြင်လိုစိတ်နဲ့ အိပ်ရာမှာထဲမှာ ကြိုးစားပြီး အိပ်မနေတော့ဘဲ မျက်နှာထသစ်ပြီး အိမ်ရှေ့ဝရန်တာသို့ ထွက်ကြည့်မိ၏။
သစ်လွင်နေသော နံနက်ခင်းလေပြေက သူမမျက်နှာနုနုလေးကို ကျီစယ်သွားသည်။ ပိတ်ရက်မို့ထင်သည်။ လမ်းသွားလမ်းလာက အနည်းငယ်ရှင်းလင်းနေ၏။ ဒီလိုနံနက်ခင်းမျိုး သူမ မရခဲ့တာ ကြာလှပြီပေါ့။ တော်တော်ကို ကြာခဲ့ပါပြီ။ သူမ ဘ၀ထဲမှာ လိပ်ပြာလေးတစ်ကောင် မရှိတော့ကတည်းကလို့ပဲ ဆိုပါတော့လေ...။
"ဟိတ်... အိပ်ရာက မနိုးသေးဘူးလား။ ထတော့နော်"
စောစောစီးစီး ထမြည်တတ်တဲ့ ဖုန်းမက်ဆေ့ခ်ျသံကြောင့် အခန်းဖော်ကို အားနာမိပေမယ့် ဒီအသံမှ မကြားရရင် သူမ အိပ်ရာကနိုးမည်မထင်။ ကြာလာတော့လည်း အခန်းဖော်က အသားကျလို့ နေပြီထင်သည်။
အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျလေးတစ်စောင် ပြန်ပို့ပြီး မပွင့်တစ်ပွင့် မျက်လုံးတစ်စုံကို လက်ဖမိုးဖြင့် ပွတ်လိုက်ကာ အိပ်ရာမှ ထထိုင်လိုက်၏။ မျက်လုံးမပွင့်သော်လည်း အကျင့်ရနေသော လက်ချောင်းတို့က ကွန်ပျူတာ ပါဝါခလုတ်ကို နေရာအတိအကျ မှတ်မိနေကြပြီ။ သူမအတွက် အခန်းမီးအလင်းရောင်လည်း မလိုအပ်။ နေရောင်ခြည်လည်း မလိုအပ်။ လက်ချောင်းများက ပါဝါနေရာကို မှတ်မိနေရန်သာ လိုအပ်သည်။ ခဏကြာတော့ ၀င်းဒိုးတက်လာပြီး Screen တစ်ခုလုံး သဲသဲကွဲကွဲ မြင်လာရသည်။
" ဘာလုပ်နေတာလဲကွာ။ ကြာတယ်"
နောက်ထပ် ဖုန်းမက်ဆေ့ခ်ျလေးတစ်ခု ရောက်လို့လာပြန်ပြီ။ သူမ မျက်လုံးလေးတွေ ပြုံးရောင်သန်းသွား၏။
"ကွန်ပျူတာ ဖွင့်နေတယ်လေ။ ခဏလေးနော်။"
မက်ဆေ့ခ်ျပို့အပြီးမှာပဲ သူမရဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေက ပွိုင့်တာကို ဂျီတော့ အိုင်ကွန်လေးပေါ်သို့ ရွေ့လျားသွားပြီး နှစ်ချက်ဆက်တိုင် ကလစ်လုပ်လိုက်သည်။ ဒီလိုမနက်စောစောအချိန်တွေမှာ ဘယ်သူကများ သူမကို စကားပြောဖို့ ရှိနေမှာတဲ့လဲ။ ထိပ်ဆုံးက မီးစိမ်းလေးကို ပွိုင့်တာထောက်လိုက်တော့ ပန်းသီးပေါ်မှာ လိပ်ပြာလေးတစ်ကောင်... သူမ နှုတ်ခမ်းပါးလေးတွေက ကွေးညွှတ်လို့...။
Butterflyးဟိုင်း... ဂွတ်မောနင်းပါ ချစ်သူ
ချက်ဘောက်စ်လေးကနေ စာတန်းလေးတစ်ကြောင်း တက်လာသည်။
Appleးဂွတ်နိုက်ပါ... မောင်
ကမ္ဘာတစ်ခြမ်းစီမှာ ရှိနေပေမယ့် ရင်ခုန်သံခြင်းထပ်တူကျနေတာကို ဘယ်သူကလာပြီး တားမြစ်လို့ ရနိုင်မှာတဲ့လဲ။ ကမ္ဘာဦးကတည်းက အချစ်မှာ မျက်စိမရှိခဲ့ဖူးလေ။
Butterflyးပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ နေ့လေးတစ်နေ့ ဖြစ်ပါစေနော်။ ရူးအောင် ချစ်တယ်...
နောက်ထပ် စာကြောင်းလေးတစ်ခု ထပ်ရောက်လာပြန်ပြီ။ အသက်မရှိပေမယ့် အသက်ရှိနေတဲ့ သူတစ်ယောက် ရိုက်လိုက်တဲ့ ဒီစာလုံးလေးတွေကို သူမစွဲလန်းမိသည်။ ပိတ်ရက်တွေမှာ တစ်ယောက်တစ်လှည့် အိပ်ပျက်ခံလို့ ပြောဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ စကားသံလေးတွေကို သူမမြတ်နိုးသည်။ Webcam ထဲမှ လှုပ်ရှားပြုမူပုံတွေကို သူမ ရိုးမသွားအောင် ချစ်သည်။ မနက်ခင်းတိုင်း မှန်မှန်နှိုးတတ်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျလေးတွေကို သူမမက်မောမိနေသည်။ ကမ္ဘာတစ်ခြမ်းမှာနေ့ ကမ္ဘာတစ်ခြမ်းမှာည...ဒါပေမယ့် သူမအတွက်တော့ သူကနေ့ဆိုလျှင်နေ့၊ သူကညဆိုလျှင်လည်း ညပဲပေါ့။
Appleးကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ပါစေ။ ကျောင်းချိန်မတိုင်ခင် နာရီဝက်နေရင် နှိုးလိုက်မယ်နော်
မနက်တိုင်း အချိန်မှန်မှန် နှိုးတတ်တဲ့ သူမရဲ့ နှိုးစက်အတွက် နေ့လည် ဆယ့်နှစ်နာရီခွဲတိုင်း သူမကိုယ်တိုင် နှိုးစက်ပြန်ဖြစ်ရသည်။ သို့သော်လည်း နှိုးစက်တာဝန်အတွက် သူမပျော်ပါသည်။ သူလည်း ပျော်နေလိမ့်မည် ထင်သည်။
Butterflyးကေကေ... ဒါဆိုအိပ်ပြီနော်။ ပြီးရင် မျက်နှာသစ်။ မနက်စာစား။ ရုံးသွားရင် မက်ဆေ့ခ်ျပို့ခဲ့ဦး
အနားမှာ မရှိပေမယ့် အနားမှာရှိသလို ထောင့်စေ့အောင် ဂရုစိုက်တတ်တဲ့ သူ...။ စာလုံးတိုင်းမှာသာ အချစ်တွေပါရင် သူမရဲ့ တစ်ကိုယ်လုံး သူ့ကိုချစ်တဲ့အချစ်တွေချည်းပဲပေါ့...။
Appleးဟုတ်... ဒါဆို အိပ်တော့နော်။ အောက်တော့။
Butterflyးအိုကေ
အော့်ဖ်လိုင်း ဖြစ်သွားတဲ့ ပန်းသီးပေါ်က လိပ်ပြာလေးကို ကြည့်ရင်း သူမတစ်ယောက် လှပသော နေ့ရက်တစ်ခုအတွက် အားယူလိုက်သည်။ သူမအနားမှာ ပန်းသီးပေါ်က လိပ်ပြာလေး ရှိနေမှဖြစ်မည်။ သည်လိပ်ပြာလေးက သူမအတွက် ပြည့်စုံခြင်းတွေကို ဆောင်ကျဉ်းခဲ့ပြီလေ။
"လိပ်ပြာလေးရယ်... မင်းပျံသန်းသွားမယ့်နေ့ကို ကိုယ်ရင်မဆိုင်ရဲပါဘူး..."
လိပ်ပြာဆိုတာ ပန်းပွင့်လေးတွေပေါ်မှာပဲ နားတတ်တာ သဘာဝလေ။ ဒါပေမယ့် သူမရဲ့ လိပ်ပြာလေးကတော့ ပန်းသီးလေးပေါ်မှာ နားတယ်တဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပန်းသီးနီနီ ဆိုတဲ့ ဂျီတော့ပိုင်ရှင် ကောင်မလေးကို ချစ်ခဲ့မိလို့တဲ့လေ။ သူ့ရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်လိုလို ကဗျာဆန်ဆန် အတွေးတွေထဲမှ သူမကတော့ မျက်လုံးလေး အ၀ိုင်းသားနဲ့ နားထောင်ခဲ့ရသည်။ သူမကရော... ပန်းသီးပေါ်မှာ နားတဲ့ လိပ်ပြာလေးတစ်ကောင်ကို နှစ်သက်မြတ်နိုးခဲ့သည်ပဲ မဟုတ်လား။ တစ်နေ့တစ်နေ့ ဂျီတော့ဖွင်တဲ့အချိန်မှာ သူမအမြင်ချင်ဆုံးအရာဟာ ပန်းသီးပေါ်က လိပ်ပြာလေး တစ်ကောင်ဟု ပြောရင် သူမငြင်းမိမည် မထင်ပါ။
အခန်း ( ၃ )
ငှက်တို့ရဲ့သဘောက အတောင်စုံရင် ပျံတယ်တဲ့။ ဒါဆိုရင် လိပ်ပြာလေးတွေကရော... ၀တ်မှုံဝရင် ပျံကြမှာပေါ့။ ၀တ်မှုံလေးတွေကြိုက်တဲ့ လိပ်ပြာလေးတွေက ပန်းသီးတစ်လုံးပေါ်မှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာ နားနေနှိုင်မှာတဲ့လဲ။ ပန်းပွင့်လှလှလေးတွေ တွေ့တဲ့အခါ ကူးကာသန်းကာ ၀ဲပျံသွားကြတယ်ဆိုတာ လိပ်ပြာလေးတွေရဲ့ အမှားတော့လည်း မဟုတ်ပါဘူးနော်။
ရောင်စုံပန်းလှလှလေးတွေ ကြားထဲမှာ ပျော်ရွင်နေပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးနေပါတယ် လိပ်ပြာလေးရယ်...
သူမရဲ့ နံနက်စောစော နှိုးစက်ကလေး ရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့တာ တစ်နှစ်နီးပါးကြာခဲ့ပြီ။ သူမလည်း မေးလ်အသုံးပြုဖို့ကလွဲရင် ဂျီတော့ဆိုတာကို အထိအတွေ့မရှိတော့တာ ကြာခဲ့ပြီပေါ့။ မသိစိတ်ရဲ့ လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုက လက်ချောင်းလေးတွေကို ပါဝါခလုတ်ဆီကို တွန်းပို့သွားပြန်ပြီလေ။ အခုမှ မနက် ၁၀း၀၀။ ဒီအချိန် ဘယ်သူတွေ ဂျီတော့မှာ ရှိနိုင်မှာ မိုလို့လဲ။ သူမမသိခဲ့တာ တကယ်ကို ကြာခဲ့ပါပြီလေ။
အလေ့အကျင့်မရှိတော့သော လက်ချောင်းတို့က အယောင်ယောင်အမှားမှားဖြင့် ဘယ်အရာကိုဖွင့်လို့ ဖွင့်ရမှန်းမသိတော့အောင် သူစိမ်းဆန်နေကြသည်။ Desktop ပေါ်က ဂျီတော့ဆိုသည့် အိုင်ကွန်လေးကို မရဲတရဲဖွင့်ကာ Scroll Bar လေးကို ပေါ်အောက်အသာလိမ့်ကြည့်မိ၏။
ပန်းသီးပေါ်ကနေ အဝေးကိုပျံသန်းခဲ့တဲ့ လိပ်ပြာလေးတစ်ကောင်... သူမ ဆွံ့အစွာ ငေးငိုင်နေမိသည်။ တမ်းတစိတ်ဖြင့် မျှော်လင့်မိသော်လည်း ပြန်လည်တွေ့ရလိမ့်မည်ဟုတော့ ဘယ်တုန်းကမှ သူမ မထင်မှတ်ခဲ့။
Butterflyးဟိုင်း.... နေကောင်းလား။ မတွေ့တာတောင် ကြာပြီနော်
တုန် တုန် ဆိုတဲ့ အသံကလေးနဲ့ သူမမျက်စိရှေ့ကို တက်လာကြတဲ့ စာလုံးလေးတွေက ဟိုးအရင်ကလို နွေးထွေးမှုတွေမရှိတော့။ သူမ ဘာပြန်ပြောရမည်လဲဟု တွေဝေနေမိသည်။ ပြန်နှုတ်ဆက်ရမည်လား။ မသိသလိုနေသည်က ကောင်းမည်လား။ ချီတုံချတုံဖြင့်... နောက်ဆုံးတော့လည်း သံယောဇဉ်က သူမ၏စိတ်ကို အနိုင်ယူသွားကြသည်။
Appleးဟုတ်ကဲ့ နေကောင်းပါတယ်။
စာရိုက်သံလေးတွေ တင်္ဒဂ တိတ်ဆိတ်လို့သွားရပြန်သည်။
Butterflyးအလုပ်များနေတာလား
Appleးမဟုတ်ပါဘူး... နင်ရော အခုဘာမှာလဲ။
သိချင်လွန်းသည် မဟုတ်သော်လည်း စကားရှာကာ မေးမိသည်။
Butterflyးဟား ဟား... ငါက မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်နေပြီလေ။ တစ်ခါတစ်ခါတော့လည်း အရင်တုန်းက နေရာလေးတွေကို လွမ်းမိသား။ နင်ရော ပြန်မလာတော့ဘူးလား။ ဘယ်တော့ ပြန်လာမှာလဲ။
Appleးသြော်... မပြောတတ်သေးပါဘူး...
အရင်တုန်းက နေရာလေးကို လွမ်းသတဲ့လား။ လွမ်းဖော်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ရပါတယ် လိပ်ပြာလေးရယ်။ ငိုချင်သလိုလို၊ ပျော်သလိုလို သူမရဲ့စိတ်တို့က မငြိမ်သက်။ သူမဘာလို့ ဒီနေ့မှ ဂျီတော့ဆိုတဲ့ အရာကို သတိရမိပါသလဲ။ အိပ်ပျော်နေသော နှလုံးသားတစ်ခုကို ဘာကြောင့် ပုတ်ခတ်လှုပ်နှိုးမိပါသလဲ။ သူမ မခံစားချင်တော့။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ဘာမှမသိတာက သိတာထက် ပိုကောင်းသည်တဲ့။ ရာနှုန်းပြည့် မှန်ကန်ကြောင်း သူမနားလည်လိုက်သည်။
Appleးအောက်တော့မယ်နော်။ နောက်ကြုံရင်တော့ တွေ့မှာပေါ့။ တာ့တာ
Butterflyးအောက်တော့မလို့လား။ ကေကေ..ဘိုင်...
ပန်းသီးပေါ်က လိပ်ပြာလေးတစ်ကောင်ကို သေသေချာချာ ကြည့်လိုက်ပြီး Right Click ထောက်ကာ Save as my picture ဆိုသော စာတန်းလေးကို ရွေးလိုက်မိသည်။ စိတ်တိုင်းကျ ပြုမူပြီးသည်နှင့် ဂျီတော့ကို တစ်ခါတည်း အောက်လိုက်မိသလို ကွန်ပျူတာကိုပါ ပိတ်လိုက်မိသည်။ ရင်ဘတ်ထဲမှာတော့ ဟင်းလင်းပြင်တစ်ခုသာ ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
သူမ၏အသိမှာတော့ လိပ်ပြာလေးတစ်ကောင် ပန်းသီးပေါ်တွင် ထာဝရနားနေတော့မည်လေ။
၁၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၉
ပုံကို Forward Mail မှရယူပါသည်။
စာရေးသူ - လွမ်းသုရင် at 5:20 PM 17 ဖတ်သူ့အမြင်
သူမ ( သို့မဟုတ် ) လွမ်းသုရင်
အသိအလိမ္မာ နူးညံ့သိမ်မွေ့စေချင်သော မေမေ... အတတ်ပညာ ထူးချွန်ထက်မြက်စေချင်သော ဖေဖေ... သူမအပေါ် အရာရာ သည်းခံ ခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့ သူမရဲ့ တစ်ယောက်သောသူ... စိတ်ဝင်စားရာကို သင်လွယ်တတ်လွယ်၊ သံယောဇဉ်ကြီးသလို ခေါင်းမာတတ်တဲ့ တဇွတ်ထိုးလုပ်တတ်တဲ့ သူမ...
လွမ်းသုရင် ဘာတွေရေး Apr 2012 (2) Mar 2012 (1) Oct 2009 (1) May 2009 (1) Feb 2009 (1) Jan 2009 (1) Dec 2008 (1) Oct 2008 (2) Aug 2008 (2) Jun 2008 (1) May 2008 (4)
ဆန္ဒတစ်ခုနှင့် ရပ်တည်ခဲ့သော နေ့စွဲများ (4)
ဖြူစင်နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းဆိုတဲ့ အဖြူရောင် နဲ့ လန်းဆန်းတက်ကြွခြင်းဆိုတဲ့ အစိမ်းရောင်ကို နောက်ခံထားလို့ တည်ကြည် ငြိမ်းချမ်းခြင်းကို ဆောင်တဲ့ အပြာရောင် စာလုံးလေးတွေကို ရေးခြယ်ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါ ဆန္ဒတစ်ခုနဲ့ ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ လွမ်းသုရင်ရဲ့ နေ့စွဲလေးတွေ ပြီးပြည့်စုံသွားခဲ့တယ်....
၉ . မေ . ၂၀၀၈ ခုနှစ်
လွမ်းသုရင် သည် သာမာန်အရပ်သူတစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ ၀ါသနာအရ အပျော်တမ်း စာရေးသည်။ မည်သည့် နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းနှင့်မှ ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း မရှိ။ နိုင်ငံရေးနှင့်ပတ်သက်၍လည်း မည်သည့်ခံယူချက်မှ မရှိ။ လူသားအားလုံးကို လူသားခြင်း အတူတူဆိုသည့် စိတ်နှင့် ကျွန်မ ခင်မင်၊တန်ဖိုးထားပါသည်။ အပြင်လောကမှဖြစ်စေ၊ အွန်လိုင်းမှဖြစ်စေ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းအားလုံးကို လူသားအချင်းချင်းဆိုသည့် စိတ်နှင့်သာ ကျွန်မ ခင်မင် ပါသည်။ မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ နိုင်ငံရေးကိစ္စမျှ ပတ်သက်ခြင်း မရှိပါ။ ကျွန်မ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ခံစားချက်များသည် စိတ်ခံစားမှုတစ်ခု အရသာ ခံစားတင်ပြခြင်းမျိုး ဖြစ်သည်။ မည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက် လက်ခံရန်အလို့ငှာ ရေးသားတင်ပြခြင်း မဟုတ်။ စာဖတ်သူအား မထေမဲ့မြင်ပြုခြင်း တစ်စုံတစ်ရာ မပါဝင်ခဲ့။ ကျွန်မ၏ ခံစားတင်ပြမှုနှင့် စာဖတ်သူ၏ ခံစားတတ်မှု တိုက်ဆိုင်သည့် အခါ ကျွန်မ၏ စာရေးသားခြင်းကို အသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်။ မတိုက်ဆိုင်လျှင် အသိအမှတ်မပြုပဲ နေကြလိမ့်မည်။ ထိုအရာသည် လောကဓံတစ်ခု မျှသာဖြစ်သည်။ ကျွန်မ၏ စာဖတ်သူသည် မည်သူမည်ဝါပင် ဖြစ်ပါစေ ကူညီသူ၊ အားပေးသူဖြစ်ပါက ကျွန်မ တန်ဖိုးထားပါသည်။
စာဖတ်သူ လက်ခံမည့် စာကိုသာ ရေးသားရမည် ဆိုသည့် ခံယူချက်မျိုး ကျွန်မ ခံယူမထားသည့်အတွက် တစ်စုံတစ်ယောက် လက်မခံနိုင်သည့် စာမျိုးရှိခဲ့လျှင်လည်း ငြိမ်းချမ်းစွာ၊ လွတ်လပ်စွာ သဘောထား ကွဲလွဲခွင့်ရှိပါသည်။ သို့သော်... မကူညီချင်နေပါ၊ မနှောက်ယှက်ပါနှင့် ဆိုသည့် စကားအတိုင်း ကျွန်မ၏ စာများနှင့်ပတ်သက်ပြီး တစ်စုံတစ်ခု သဘောထားကွဲလွဲခြင်း၊ မနှစ်မြို့ခြင်း ရှိခဲ့ပါက ကျွန်မ၏ ဘလော့ခ် စာမျက်နှာအား တိတ်ဆိတ်စွာပိတ်၍ ထွက်ခွာ သွားနိုင်ပါသည်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း အခြားသော စာရေးသူများနှင့် သဘောထား မတိုက်ဆိုင်ပါက ထိုသို့သာ ပြုမူပါသည်။ မည်သူကိုမျှမနှောက်ယှက် ခဲ့ဖူးပါ။ ကျွန်မအားဖြစ်စေ၊ အခြားစာဖတ်သူ တစ်စုံတစ်ယောက်အား ဖြစ်စေ စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေမည့်ကွန့်မန့်များ၊ စီဘောက်စ်မက်ဆေ့ခ်ျများ ထားခဲ့ခြင်းသည် မိမိ၏ စိတ်ဓါတ်၊ အဆင့်အတန်းအား ပြသခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်မအနေဖြင့် မည်သူ့ကိုမျှလည်း ငြင်းခုံတုန့်ပြန်နေမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်မ လုပ်ရမည့်အလုပ်ကိုသာ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေမည် ဖြစ်ပါသည်။ အချိန်ကုန်ခံကာ ငြင်းခုံ ရန်ဆောင်ရခြင်းအား ကျွန်မ မုန်းပါသည်။